ukukhishwa kokumbozwa kokungeniswa kokususa upende ngohlelo lokushisa lokungeniswa
Ukukhishwa kokufakwa kwe-induction isimiso
I-induction disbonder isebenza ngomthetho wokungeniswa. Ukushisa kwenziwa ku-substrate yensimbi futhi ukubopha kuphukile. Ukumbozwa kususwe ngokuphelele ngaphandle kokuhlakazeka futhi kukhululeke ngokuphelele kumakhemikhali angcolisayo, okusho ukuqhuma kwezindaba Lokhu kusobala ukuthi kwenza ukulahlwa nokuvuselelwa kabusha kwemfucuza kube lula futhi kushibhile. Ngisho nangaphakathi kwamapayinti nemifantu ebusweni ingubo ayikhishwe.
Ukushisa kwe-HLQ Induction kusebenza ngokudlulisela amandla ngokushesha ku-substrate yensimbi, ngenxa yalokho kuvikela ukushisa okulawulwayo kobuso nokususwa okusheshayo kwezinhlobo eziningi zokumboza.
Kuyini ukususwa kokumbozwa kokungeniswa?
I-HLQ Induction uhlelo lokususa Ithuluzi lokushisa lokungeniswa kwe-state-of-the-art elikhumula ngokushesha upende nokuqina, ukwakhiwa okuphezulu. Kuyindlela esheshayo, ehlanzekile nephephile yokuhlubula izingubo.
Ukushisa ukushisa ingadlula izindlela zendabuko zokususa upende. Ukuqhumisa okungalawuleki noma ukugaya i-disk ngokuvamile kusebenza kakhulu futhi kuza nezinye izindaba ezinjengezindleko zokuvalelwa noma ukuqoqwa nokuqoqwa kwemidiya yokuqhuma, kanye nokuhlunga noma ukwehlukaniswa kwezinto zokumboza ezizolahlwa. Kumaphrojekthi amaningi asemadolobheni lezi yizinto ezibalulekile futhi kubiza kakhulu ukunqoba. Ngenkathi, lapho ukumbozwa kususwa ngokufakwa, imfucuza kuphela ingubo uqobo yayo ezimeni eziningi engashanyelwa noma ikhishwe njengemfucumfucu ethile ethile.
Iphephile ukusebenza imvelo: Ukushisa okulawulwayo, okwenziwe endaweni kubangela intuthu enciphise kakhulu nothuli olunobuthi.
Easy Hlanza: Izinto zokumboza ikakhulu ziyaxebuka emakhazeni kunokuba zicutshungulwe.
Noiseless operationAbasebenza bangasebenza ezindaweni zomphakathi ngaphandle kokudala ukuphazamiseka.
Hambayo: Imishini imangele futhi inokwethenjelwa kodwa isisindo esincane futhi kulula ukuhamba ezindaweni zokusebenzela.
Kuncishisiwe amandla ukusetshenziswa: Ukulethwa kokushisa okusheshayo, okunembile nokuphindaphindwayo kwenza inqubo yokususa ukugqoka ingabi namandla kakhulu.
Indlela eguquguqukayo: Indawo yokushisa, ukuskena, i-freehand ne-semi-othomathikhi.
Akukho ukulinganiselwa: Uhlelo lungasetshenziswa ezindaweni ezicabalele, imijikelezo eyindilinga, amakhona angaphakathi / ngaphandle, zombili izinhlangothi ze-substrate, ama-rivets azungezile, njll.
Ukukhishwa kokufakwa kwe-induction kusetshenziswa ezimbonini eziningi, njengemikhumbi / olwandle, izakhiwo, amathangi okugcina, amapayipi, amabhuloho nolwandle.
Ukufakwa kwe-induction kufaka phakathi ukusebenzisa i-coil yamanje kanye nekhoyili yokungenisa ukukhiqiza insimu enamandla ye-electro-magnetic. Uma isetshenziswe kahle, le nsimu ikhiqiza ukushisa ngaphansi kokumboza ku-substrate yensimbi, okuholele ekutheni i-coating isuse ukubopha ngokushesha futhi kalula ebusweni bensimbi.
E-Alliance, sisebenzisa le nqubo ukususa okokumboza okusansimbi okufana nalokhu:
Ukumbozwa okuningi kufaka phakathi ama-epoxies, urethanes nabanye
Izingubo zokuvala umlilo (PFPs)
Inamathele futhi irabhulisiwe injoloba kanye ne-chlorinated
Ukususwa Kwokumboza Okungenayo Emathangi Esitoreji -
The Uhlelo lokushisa lokukhipha ukususwa kwezingubo kulungele kakhulu ukweqa ngokushesha nangokushesha izindawo ezinkulu noma ukuhlolwa kwamasele e-weld emathangini okugcina. Okuhlangenwe nakho okuvela ekusebenzeni kwamathangi kubonise ukuthi ingilazi-fiber eminyene (5-6 mm) ingasuswa ngamanani okwehliswayo afinyelela ku-10-12 m2 / hr. ngenkathi amasistimu wokudweba wendabuko amancane angasuswa ngamanani afinyelela ku-35 m2 / hr.
Uhlelo lwe-Induction alunikeli kuphela izinzuzo ezinkulu zezomnotho njengamazinga aphezulu okuqaqa nokulahlwa okuncane kwemfucuza, kepha futhi lwenza nokusebenza okusebenziseka kahle kwemvelo.
Ukususwa Kwokumboza Okungenayo Emapayipini -
Uhlelo lwe-HLQ Induction Heating System lobunikazi lokususwa kwezingubo lukhombisile ukuthi lusebenza kahle kakhulu emapayipini nakumaphrojekthi wamaphayiphi abukhoma emhlabeni jikelele. Kususa kahle futhi ngokuphepha ukumbozwa okufana ne-Coal Tar, i-Ebonite, i-3LPE / i-3LPP, injoloba namanye amalayili anzima ngobukhulu obufinyelela ku-30 ​​mm.
Ukususwa kwezingubo nge-HLQ Technologies kuyabiza kakhulu futhi akukhiqizi umgqomo owengeziwe noma udoti wamanzi, okuletha amandla amakhulu wokonga ekuphatheni kwezinto, ikakhulukazi ezindaweni ezikude. Ukumbozwa kususwa kalula emapheshaneni noma izingcezu okulula ukuzifaka ezikhwameni zemfucuza ukulahlwa ngaphandle kwengozi yokungcola emoyeni, emhlabathini noma emanzini.
Ukusebenza ibanga ukusuka kwiyunithi eyinhloko kufika ku-100m evumela ukusebenza okuguquguqukayo nokusebenza kahle. I-HLQ isungule isixazululo esinelungelo lobunikazi esusa ubungozi bokushisa ngaphezulu lapho usebenzisa uhlelo lokungeniswa ngensimbi. Lokhu bekuyinto ebaluleke kakhulu enqubweni yokuthola ngempumelelo imvume yokusebenzisa amapayipi kawoyela negesi aphilayo.
Izigaba 未 分类 Amathegi ukususwa kwengubo, ukufakwa kokufakwa kokumboza, ukususwa kokumbozwa kwepayipi, ukususwa kokumbozwa ngensimbi, ukususwa kokumbozwa kwamathangi, ukufakwa kokufakwa kwe-induction, ukususwa kokumbozwa kokungeniswa, uhlelo lokususa ukumboza lokungeniswa, ukukhishwa kwepende lokungeniswa, lokushisa ukususwa ngopende, ukususwa ngopende Imeyili kwemikhumbi